IPharadesi Cabin Mollymook - I-Airbnb
IPharadesi Cabin Mollymook
Mollymook, New South Wales, i-Australia
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Stig
U-Stig Ungumbungazi ovelele
Le Log Cabin entsha iwuhambo lwemizuzu eyi-10 nje ukuya eMollymook Beach.
Ikhabethe elibanzi lingu-20m2 futhi linekamelo elilodwa elinombhede olingana nendlovukazi, itafula lokudlela kanye nomabonakude. Kunendlu yokugezela ehlukene eneshawa, indishi yokuwasha kanye nendlu yangasese. Futhi ikhishi elinesiqandisi, i-micro wave oven, i-toaster neketela. Kukhona nesitofu segesi esishibilikayo kanye nosinki.
I-cabin ingeyezivakashi eyodwa noma ezimbili. I-port-a-cot ingahlinzekwa ngesicelo.
Ubuncane bokuhlala ubusuku obubili.
Ikhabethe elizimele litholakala ngemuva kwendlu enkulu futhi ukungena ngesango ngakwesokudla kwendlu. Ukhiye wekhabethe usesefeni yokhiye ohlangothini lwesokudla lomnyango ongaphambili wendlu. Sizoxhumana nawe ngephinikhodi enezinhlamvu ezi-4 uma ukubhukha sekuqinisekisiwe.
4.97 · 121 okushiwo abanye
I-Mollymook iwuhambo olula lwamahora angu-3 ukuya eningizimu ye-Sydney ogwini oluseningizimu ye-NSW.
Kusukela olwandle olunesihlabathi esihle ukuya ekudleni kwasolwandle okusha okumnandi, i-Mollymook ilungele iholide lolwandle.
Jabulela ukubhukuda, i-snorkeling, ukusefa kanye nokudoba. Spot amahlengethwa nemikhomo efuduka ngasogwini.
Dlala igalofu endaweni enokubukwa kolwandle futhi udle endaweni yokudlela ehlonishwayo ye-Bannisters.
I-Mollymook Golf Club inezinkundla zegalofu ezimbili ezinhle, i-Hilltop ne-Beachside, kanye nama-clubhouse amabili esimanje.
I-Ulladulla iqhele ngemizuzu emi-5 kuphela ngemoto ukuhlinzeka zonke izitolo nezitolo ezinkulu ozidingayo.
UMilton uhlinzeka ngendawo yekhefi nerestaurant kanye nezitolo ezikhethekile nezindawo zobumnandi.
Uzoba nobumfihlo obugcwele kodwa siyajabula ukuxhumana nawe futhi siphendule noma yimiphi imibuzo mayelana nendawo noma siphakamise izinto ezinhle ongazibona noma izindawo ongaya kuzo.
UStig Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-11813
Hlola ezinye izinketho ezise- Mollymook namaphethelo